Uhambo loSapho | I-Seymour, IN | IZiko leNdwendwe laseJackson County
Ngamana 23, 2022 812.524.1914
Cofa apha ukuze ubone ukuba kwenzeka ntoni eJackson County kule nyanga!
Gcina kunye nento entsha kwiJackson County.
Cofa apha ukuze ubone iminyhadala kunye neMisitho yethu.
Iminyhadala kunye neMisitho yethu
Jonga yonke iminyhadala ngokukhetha umhla kwikhalenda okanye ngokunqakraza ibha ebomvu kuluhlu olupheleleyo.
IJackson County, IN
Ngengqokelela enkulu yeendawo zokuzonwabisa zangaphandle kunye nemisebenzi yosapho enobuhlobo, iindwendwe zinokufumana uluhlu lwemisebenzi ngokuqhagamshelana nathi kwiziko le-Jackson County Visitor Centre. Ukwenza kube luhambo olulula kulo naliphi na icala, siyiyure emazantsi e-Indianapolis, iyure emantla eLouisville, KY, iyure ukusuka eCincinnati, OH, kunye nokutsiba-tsiba-kunye nokutsiba ukusuka eBloomington naseNashville, eIndiana. Thatha nje ukuphuma kwi-50 kwi-Interstate 65 kwaye uze kusibona. Uluhlu lwethu olubanzi lwemisitho enobubele yosapho kunye neminyhadala, yenza ukuba ukwazi ukwenza amaxesha ongalibalekiyo. Siyakukhuthaza ukuba usenze uhambo lwakho kulo lonke ulwazi onokuludinga ukuze ucwangcise uhambo lwakho olulandelayo ukuya eJackson County, Indiana. Cofa apha isikhokelo esincinci kwiJackson County!
Iidolophu zethu ezincinci
Yakhiwe ngo-1850, olu luntu luncinci luyazingca ngelifa lemveli. Ehleli kwiindlela zikarhulumente 58 yaye 135, ungahamba ukusuka Freetown-Pershing Museum, ikhaya ubuncwane obuninzi kuquka enye 7 Jackson County inyathi, ukuya kwivenkile ice cream okanye Sgt. URick's American Cafe kunye neBBQ. Jonga indawo yasemaphandleni entle ukuya kuyo Iwayini laseSalt Creek kwaye ufumane incasa yeewayini zabo zokuphumelela amabhaso ngelixa uthatha indawo entle yokujonga indawo.
Olu luntu lubhiyozela ukuba sisihlalo sedolophu kunye nekhaya elinembali etyebileyo kunye nenkundla yenkundla yedolophu yokuba ngumphathi wazo zonke iindawo ezinembali kuluntu lonke nakwiindawo ezikufutshane. Uluntu luyakonwabela ukuba likhaya ekuphumeleleni amabhaso IJackson County Fair. IBrownstown ihlala kwi-US50, enguhola wendlela elunxwemeni ukuya elunxwemeni kunye nendlela ephambili yokudlula empuma nasentshona. Ngelixa uhleli kwiinduli ezibukekayo zehlathi laseJackson-Washington State kunye neHlathi leSizwe leHoosier, yimizuzu eyi-10 kuphela ukusuka kwi-I-65.
Ukutsiba ngokukhawuleza kwi-I-65 kunye ne-US 31, iCrothersville likhaya labo kwiTigers abanekratshi kunye nonyaka wabo Umnyhadala oBomvu, oMhlophe noBlue. Umthendeleko ubhiyozela ukuthanda izwe kunye neFlegi yaseMelika. Yaqala ukwenzeka ngo-1976 xa i-United States yayibhiyozela i-bicentennial yayo. IHolo yaseHamacher idlala indima entliziyweni yolu luntu luphumelelayo. Iziganeko ezininzi zasekuhlaleni kunye nethiyetha yesidlo sangokuhlwa sinokonwabela kule ndawo yembali. Peppered kunye zokutyela kunye neevenkile, eli liqabane lethu esemazantsi Jackson County ububele.
I-Seymour ifikeleleka ngokulula ekuphumeni kwama-50 nge-I-65, e-US 50, e-US 31 nase-Indiana 11. UMeedy W. Shields kunye nenkosikazi yakhe uEliza P. Shields babhalisa umhlaba wesixeko saseSeymour ngomhla wama-27 ku-Epreli ngo-1852. USeymour wakhula ngokukhawuleza nge ukongezwa kweOhio kunye neMississippi Railroad ngo-1854 kwaye kungekudala yaba sisixeko esikhulu kwiJackson County. I-Seymour ibonelela ngomzi mveliso, ivenkile, indawo yokuhlala, ukutya kunye neminyhadala kunye neziganeko, kubandakanya Seymour Oktoberfest, ebeka imbeko kwilifa lemveli laseJackson County. I-Rock'n Roll Hall of Fame inductee uJohn Mellencamp wazalelwa eSeymour, kwaye iindwendwe zinokujonga iindawo ezininzi kulo lonke uluntu. I-Seymour ikwayindawo yokuqala yokuphanga uloliwe ohamba-hamba ngowasekhaya, odumileyo Reno Gang. Bukela ividiyo yebali ngokunqakraza apha. Idolophu enkulu yedolophu ibonelela ngamathuba ahlukeneyo kodwa ayilahli idolophu encinci.
IMedora ikumda osemazantsi-ntshona eJackson County kwaye inika iimbono eziphefumlayo kunye nedolophu encinci ivakale. Misa kweyona bhulorho ide igqunyiweyo eMelika, ekwi-Indiana 235 okanye ubone iMedora Brick Plant eyimbali. Abahlobo beMedora Covered Bridge baququzelela iSidlo sonyaka kwiBhulorho, eyinto ekhethekileyo yokutyela kwibhulorho ukongeza kwifandesi ethe cwaka kunye nokuzonwabisa. Cofa apha ukuze ufunde malunga nesidlo sangokuhlwa. I-Medora yimbonakaliso yobubele kwaye ibonakala ngexesha IMedora iya kumnyhadala wePinki ngo-Okthobha okanye UMnyhadala weKrisimesi weMedora ngoDisemba. IMedora ifikeleleka kwi-US 50 okanye e-Indiana 235.
IVallonia yayiyindawo yokuqala yokuhlala eJackson Khawunti kwaye yayibalekelwa ukuba yintloko yokuqala yombuso. IVallonia imi ngaphandle kwesihlalo sedolophu kwaye iyafikeleleka ukusuka eIndiana 135. IFort Vallonia sisikhumbuzo sembali yaseVallonia kwii-1800s zakuqala kwaye iyaphila ngo-Okthobha ngexesha Umnyhadala weentsuku ze-Fort Vallonia. Iinduli kunye namaqhina ayabonakala eVallonia nakwiimarike ezininzi zasefama kwaye izitendi zemveliso zingafunyanwa zijikeleze lendawo, eyaziwayo ngecantaloupe emnandi kunye nevatala.
jonga imbali yeJackson County
Enye yezona zinto zinomtsalane kuthi ngaphezulu kweminyaka engama-60 ibe yiBrownstown Speedway, ebekwe eJackson County Fairgrounds. Ukhuphiswano lubanjwa iinyanga ezisibhozo ngaphandle konyaka, kwaye sinikezela ngeeklasi ezahlukeneyo. Ababhenkethi banokuphinda bahlole imbali yeJackson County nakweyiphi na iminyuziyamu yethu emithandathu, kubandakanya iMyuziyam yaseFreeman Field Army kunye neMyuziyam yaseFort Vallonia. Iimbali zembali zinokungena kwindima eyadlalwa nguJackson County kuLoliwe ongaphantsi komhlaba, owanceda amakhoboka abalekileyo afikelela kwinkululeko. Kukwakho neendlela ezininzi zembali, iibhlorho ezigqunyiweyo, kunye neendawo zokugcina ezijikeleze iindwendwe ukuze zizonwabele.
Abathandi bobugcisa bayonwabela
Indawo yoBugcisa baseKhaya
Abathandi bobugcisa baya kukonwabela ukutyelela ingqokelela yobugcisa eyahlukeneyo yaseJackson County. IZiko laseZantsi eIndiana loBugcisa, ukuQokelelwa koBugcisa beSwope, kunye neNgxowa-mali yeBrownstown yoBugcisa zonke zinegalelo kwinkcubeko yale ndawo. Abandwendweli banokubakho kumboniso kwenye yeqonga loluntu lwethu kwaye bahambe umzila wobugcisa ukuze babone amagcisa asekuhlaleni.
BONA ISIGANEKO SOBUGCISA
ulonwabo lwangaphandle kwezona zintle
Kubathandi bethu bangaphandle, iJackson County ibonelela ngeendlela ezininzi zokuzonwabisa. IMuscatatuck National Refuge Refuge ibonelela ngokuzingela, ukuloba kunye nokubukela iintaka amathuba. Nokuba kuseHlathini yeLizwe iJackson-Washington, iNdawo yoLonwabo yeNdawo eHlazileyo yeHlabathi okanye iHoosier yeSizwe ungakhetha inkampu ilungele ikhaya lakho-kude nehambo yasekhaya. Ukuhamba ngeebhayisikile, ukuhamba intaba kunye nokukhwela ihashe ziindlela ezithandwayo zokutyelela ezi ndawo zingafakwanga, njengoko zihamba amakhulu amawaka eehektare. Kwindwendwe ethambekele kwezemidlalo, sikwabonelela ngegalufa elihle.